वैशाख १७ गते क्षुद्रग्रहबाट पृथ्वीलाई खतरा छ? - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका १५ बैशाख २०७७, 2:21 pm
अहिले सामाजिक सञ्जालमा क्षुद्रग्रहबारे चर्चा भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा क्षुद्रग्रह १९९८ ओ.आर.२ पृथ्वी नजिकै आउने भन्ने हल्ला फैलिएको छ।
नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षुद्रग्रहबारे जानकारी गराएको छ।
के यो क्षुद्रग्रहबाट पृथ्वीलाई केहि ख तरा छ त?
यो क्षुद्रग्रह सन् १९९८ जुलाई २४ तारिखमा पहिलो पटक पत्ता लागेको थियो। त्यसैले यसको नाम अर्थात् १९९८ ओ.आर.२ रहन गएको हो। यो क्षुद्रग्रहको वैज्ञानिक नाम ‘५२७६८’ हो। कुनै पनि क्षुद्रग्रहलाई हामीले/खगोल वैज्ञानिकहरुले राम्रोसँग बुझेपछि यस्तो किसिमको नाम दिइन्छ। विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि निगरानीबाट प्राप्त ज्ञान अनुसार यो क्षुद्रग्रहबाट पृथ्वीलाई कुनै खतरा छैन। त्यसैले हाल कोही पनि त्रसित हुनुपर्ने अवस्था होइन।
हालैको एउटा अध्ययनले यो क्षुद्रग्रहको आकार करिब २ किलोमिटरको रहेको बताइएको छ। सुरूमा यसको आकार १.८ देखि ४.१ किलोमिटर अनुमान गरिएकोमा अरेसीबो अब्जरभेटरीले अप्रिल १८, २०२० मा लिएको राडार तस्बिरको अध्ययनबाट यो क्षुद्रग्रह करिब २ किलोमिटरको रहेको बताइएको छ। त्यसैले नजिक आउँदा पृथ्वी-चन्द्रमाको दूरीभन्दा कम्तिमा १६ गुणा टाढा रहने र करिब २ किलोमिटरको रहेकोले साथै यसको औसत अपेरेन्ट म्याग्निच्युड करिब ११ रहेकाले नाङ्गो आँखाले यसलाई देख्न सकिँदैन। यसलाई अवलोकन गर्न ठूलै खालको टेलिस्कोप आवश्यक पर्छ।